‘हातमा सीप भए भोकै बस्नु पदैन, शिर ठाडो पारेर काम गर्न सकिन्छ' | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ आश्विन ९ गते १०:२६
आरएन टेलर्सका सञ्चालक नानुराज परियार
कति भयो तपाईं ले यो ब्याबसाय संचालन गर्नु भएको ?
म यो ब्याबसायमा लागेको त धेरै भयो तर पसल सञ्चालन गरेको चाँहि दश बर्ष भयो ।
कस्तो छ ब्यापार अहिले ?
ब्यापारको त के कुरा गर्नु र खोइ सिजन जति सबै गहिसक्यो ब्यापार त अत्यन्तै निराशाजनक छ । भाडा तिर्न र दैनिकी खर्च चलाउन समेत गाह्रो भएको छ।
पसलमा स्टाफ पनि राख्नु भएको छ कि ?
राखेको थिए, यो कोरोनाको कारणले गर्दा आज भोलि एक दुई जना मात्रै छ्न । अरु बेला हुन्छ्न म सँग स्टाफ किन कि सिजन को बेला झन कालिगढको आवश्यकता पर्छ ।
कति लगानिबाट सुरु गर्नु भयो ?
मैले यो पसल तिन लाख बाट सुरुवात गरेको हुँ । आज दश बर्ष भयो । हातमा सिप भएर मात्रै हुदैन, लगानि पनि आवाश्क हुने रहेछ ।
तपाईं यो पेशामा कसरि लाग्नु भयो ? कस्तो रह्यो विगत ?
म यो पेशामा कसरि लागे भन्दा म २०५१ सालको एसएलसी परिक्षा दिएपछि घरको आर्थिक स्थित हेरेर सबै जानाले एउटा एउटा काममा लाग्नु पर्नि हुन्थ्यो । त्यस्तै क्रममा म पनि यो काममा लागे यो काम आउनलाई चै मेरो जेठो दाजुको ठुलो हात छ । दाजुले मलाई तिमि ले अब सिलाईको काम सिक भनेर भिनाजुको मा लगिदिनु भयो । त्यसपछि म त्यहाँ सीप सिक्न थाले पछि एसएलसीको रिजल्ट आयो । पछि फेरि कलेज पढे दूई बर्षको कोर्ष सकेपछि काठमाडौ आए अब के गर्ने भन्ने चिन्ता हुदै थियो संयोग कस्तो मिल्यो भने मलाई पहिला काम सिकाउने भिनाजुले नै काठमाडौंमा पसल खोल्नु भएको रहेछ । पछि म फेरि उहाँ सँग सिलाई काम नै सिक्न थाले । उहाँसँग मैले दुइ बर्ष सम्म काम सिके पछि आर्थिक भार पनि पर्दै जान थाल्यो, अनि म फेरि अर्कै पसलमा कालिगड गर्न थाले । यस्रै क्रममा मेरो एउटा सस्थाको मान्छे सँग भेट भयो त्यस सस्थालाई चाँहि सिलाईको तालिम दिने शिक्षकको आवश्यकता परेको रहेछ । म यता कालिगढ गर्दै उता संस्थामा काम सिकाउन थाले ।
यस्रै बीचमा मेरो आफ्नो मात्रै निर्माणले गर्दा मैले विवाह गरे यसले गर्दा झन मलाई काम नगरि सुख नै थिएन । आफु शिक्षित भएको कारण श्रीमतीलाई पनि पढाए यो बीचको दुख सम्झिदा त आज पनि आशु आउछ । यसरि दुःख गर्दै जादा मेरो अनुभव पनि बढ्दै गयो । फेरि मैले यति मात्रै शिक्षाले हुदैन मैले अरु पनि ज्ञान लिनु पर्छ भनेर सिटिभिटिमा तेस्रो बर्षको कोर्स पुरा गरेर फेरि तालिम दिन थाले अहिले पनि म सिलाई सम्बन्धि तालिम दिन्छु यो लकडाउन हुनु भन्दा अगाडी पनि म तालिम दिने क्रममै पोखरा मा थिए ।
सिलाइ पेशा को सम्भावना के छ ?
सिलाई कटाईको सम्भावना एकदम राम्रो छ । किनकि हातमा यो सीप भएको मानिस भोकै बस्नु पर्दैन यदि यो सीप सिकेर बाहिर नै जाने हो भने पनि अत्यन्तै सहज र सरल तरीकाबाट काम गर्न सकिन्छ । म सँग एउटा अनुभब पनि छ केहि बर्ष अगाडी म बिदेश पनि गएको थिए । म सिलाई सम्बन्धि कै कामले गएको थिए। बिदेशमा बस्दा अन्य हाम्रा नेपाली दाजुभाइ हरु पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । उहाहरु घाममा दुख गर्नुहुनथ्यो तर हामीले भने भित्र एसिमा बसेर सरर कपडा सिलाउने काम गरेका थियौं । सीप सिकेर विदेश जाँदा राम्रै हुने रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो ।
पहिले पहिले त विशेष गरि सिलाई परियार समुदायले मात्रै गर्दथे अहिले त सबैले गर्छ्न नि कस्तो लाग्छ ?
यो त एक खुसिको कुरा नै हो किन भने कपडा सिलाउदैमा मानिस सानो जात को हुने अछुत हुने त हुँदैन रहेछ, नि । यदि हुने भए त उहाँ हरु पनि हुनु पर्ने हैन र ? यो कुरा त जातको घमण्ड गर्ने हरुले बुझ्नु पर्ने हो । तपाईले जातको कुरा गरिहाल्नु भयो, यो सम्मानित नेपाली मौलिक पोशाकको पेशा लाई आजभोलि जातको घमण्ड गर्नेहरुले बुटिक नाम दिने गरेका पनि छ्न ।
यो एक नकारात्मक बिकृति हो । यसले हामीलाई त्यति राम्रो सन्देश दिएको छ, जस्तो मलाइ लाग्दैन किन कि उनीहरुले पनि त्यहिं कलमा सिलाउने हो हामिले पनि सिलाउने नै हो । आखिर कुरा त एउटै हो उनिहरुले पनि हामिबाट नै सिकेका हुन नि हाम्रो रोजिरोटि खोसिएको होनि यो कुरा नबुझिदिंदा अलिक दुख पनि लाग्छ । हामी लाई दलित देख्नेहरु पनि त आज यहीँ पेशामा छ्न र पनि किन सोच परिवर्तन नभएको अचम्म लाग्छ । हिजो मैले उनिहरु लाई यो सीप सिकाएर त आज उनीहरुको घर परिवार चलाउन सह्ज भएको छ । त्यसैले जातको घमण्ड गर्नु अगाडि र आज बुटिक पसल भनेर ठुलो गफ दिनु अगाडि एक पटक अँखा चिम्लेर सोच्न अनुरोध गर्द्छु।
सिलाई पेशामा आउन चाहाने युवाहरु लाई के भन्नुहुन्छ ?
यो सिलाई पेशामा आउन चाहाने युवाहरुलाई आउनु होस एकदमै सम्भावना छ, भन्न चाहन्छु । यो क्षेत्रमा युवाहरुको नै खाचो छ, किनकि पहिला भन्दा अहिले आधुनिक डिजाइनको सिलाई आवश्यक भएको हुँदा र सीप सिकेर आउनु जरुरी छ । बिदेश नै जानु भयो भने पनि तपाईले दुख पाउनु हुन्न । बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन भोकै बस्नु पर्दैन । यो क्षेत्रमा युवाको खाँचो छ । त्यसैले युवाहरु लाई यो क्षेत्रमा आउन लाई अनुरोध गर्दछु ।
सिलाई पेशा मा समस्याहरु के कस्ता छ्न ?
समस्याहरु त छन नि किन नहुनु र ? दिन–दिनै बजारमा फरक–फरक खालका डिजाइनहरु आहिरहेका हुन्छ्न । हामीसँग पनि ग्राहकले त्यस्तै खोज्छ्न । ग्राहकले नयाँ बजारमा आएको डिजाइन अनुसारको खोज्छ्न यदि त्यस्तै नभए लादैनन । यो एक इन्जिनियरिङ काम पनि हो । कपडा कटिङ गर्दा नमिले पुरै कपडा नै बिग्रेर खेर सम्मेत जान सक्छ ।
राज्यले के गरिदियो भने यस पेशालाई सहज र अझ व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ ?
राज्यले सिलाई पेशा गर्ने कालिगढहरु माथि राजनीतिको अन्त्य गर्नु पर्छ, किनभने राज्यले सिलाई पेशाकालागि बिभिन्न योजनाहरु बनाइ बजेट छुटाएको हुन्छ । तर त्यो बजेट तथा बिभिन्न तालिमहरु नेताले आफ्ना आफन्तको हातमा पारिदिने चलनले गर्दा हामी व्यावसायि र कालिगढहरु मारमा पर्न गरेका छौं । यति सम्म कि हामी सिलाई पेशामा भए पनि सिलाई सम्बन्धि हुने कार्यक्रम तथा तालिम सेवा सुबिधाको विषयमा केही पनि जानकारी पाउदैनौं, भनेपछि तपाई आँफै बुझ्नुहोस् कति सम्मको समस्या छ ? नेता ले आफन्त लाई मात्रै चिन्दा । यति मात्रै न भएर नेपालि मौलिक पोशाकको पनि प्रयोगमा ध्यान दिनि हो, र राज्यले बाहिर बाहिरबाट आउने कपडा लाई बढि प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने । हामीले यो पेशा लाई झन बढाउने र नेपाली मौलिक पोशाकको चिनारी दिन समेत सकिने हुनाले राज्यले यो कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।